Ukuvikelwa komphakathi - isimiso izinyathelo lisisebenzisa State nomphakathi ukuqinisekisa okuqinisekisiwe ubuncane izimo zokuphila ezanele, yini nokusekela ukuphila kwakhe futhi khona komuntu asebenzayo.
Nganoma yisiphi isikhathi, noma ngabe isiphi umphakathi, inkinga ka social ukuvikelwa kwezingane kubalulekile. Lobu buhlobo kubonakala eqinisweni lokuthi izingane, ne ukuntula kwabo esingokwemvelo wokuzibusa empilweni, ezingeni ngokomzimba, nakho ngokwengqondo futhi ukuphila kudingeka njalo futhi edinga ukunakekelwa nsuku zonke abantu abadala. Singasho ukuthi nokugcinwa kwezingane, izidingo zabo, ebavikela izinsongo nezingozi kungumsebenzi hhayi kuphela abazali, kodwa futhi wonke umphakathi kanye nesimo.
Umqondo jikelele ebuntwaneni bubonakala izindlela eziningi nenchazelo ku emikhakheni ehlukahlukene. Lokhu kwenza kube nzima ukuchaza ngokucacile into zokuvikeleka komphakathi. Esikhathini Sandvulelo "Ukuvezwa Samalungelo Engane Se," ingane uchazwa ngokuthi umuntu "yokungavuthwa ngokomzimba nangokwengqondo," ngakho kufanele unake okukhethekile umphakathi ngasiphi ezingeni . Umndeni Ikhodi Russian Federation wathi "ingane nomuntu ongazange attained yobudala, okungukuthi iminyaka engu-18."
RF Uhulumeni, nentshisekelo ukuthuthukiswa kohlelo ingane inhlalakahle, basungula izinhlelo ngenjongo ekhethekile ukuze ibandakanye nokuxhumana zezinkonzo eziningana (Education, Health, Wezangaphakathi, kanye nabanye.). Nokho, umbono wethu, uhlelo ngezinga elithile ukumboza inkinga izingane wokuvikela, njengoba umthetho, baqondiswa kuphela izigaba ecacisiwe. Phela, uma ebuntwaneni kahle ngakho ivikelwe isimo, umphakathi, bonke abantu, kungani kunenkinga ye okwandisa nekusebenta zokuvikeleka komphakathi? Ngokusobala, sidinga uhlaka a ehlelekile yokuvikela izingane, elibonisa ngokucacile imisebenzi yazo zonke izifundo yemfundo yomphakathi, kubazali ziphethe isimo.
Wonke umzali ofuna ukuvikela izingane zabo kunoma uhlobo usongo nengozi, lokhu kuyaqondakala. Uma siqhubekela phambili phansi iketanga, kubalulekile ukuba ngonanzelelo ukuvikelwa kwezingane ezikhungweni zemfundo, ngoba lokhu lapho ingane ifunda, kudala yena njengomuntu, kulapha lapho ingane yakha izinzuzo zalo siqu futhi isikhundla nga which he uzoqhubeka ethinta ngokusebenzisa ukuphila.
Othisha esikoleni, bonke abahlanganyeli nihlanganyele, basize izingane ukuba uqaphele futhi ahlele ngoba izingane izimo lapho bangakwazi bazizwe ubuntu ukhululekile futhi evulekile. Abahileleke ngokuqondile imisebenzi ku zokuvikeleka komphakathi ingane esikoleni akuzona othisha kuphela, kodwa futhi osonhlalakahle, odokotela bengqondo esikoleni, hhayi ngaphandle isizathu ezikoleni zethu kukhona isikhundla uthisha ekilasini. Zonke lezi abantu mandla ekusebenziseni izindlela ezihlukahlukene kanye nezindlela uzama ukuvikela ingane kusukela kungenzeka imiphumela emibi futhi ukusiza ekuthuthukisweni kwamakhono ukuze bazivikele kwamathonya amabi we isimo senhlalo.
Izinjongo imfundo, okuqukethwe kanye izinhlobo umsebenzi uthisha ekilasini zinezikhathi ngokwehlukahlukana kwabo. Basuke kunqunywa izithakazelo, izimfuno, izidingo izingane nabazali bazo, impilo yasesikoleni, umphakathi, ekilasini. Futhi udinga ukunika amandla ehlanzekile amathuba nguthishela, ngaphezu, indima yakhe kuchazwa futhi iyahlukahluka kuye ngokuthi okuhlangenwe nakho isinyathelo collective, engu-abafundi, nezinye izinto. Phakathi imisebenzi Pedagogical we uthisha ekilasini yinkulumo evelele imfundo kwebafundzi, okuyinto ukuhlanganisa imizamo yabo bonke abafundisi ukuze kuxazululwe le nkinga, ngo-yisikhungo esisodwa. Ukuvikelwa komphakathi kwezingane kusukela izici kwezemvelo okunomthelela omubi kakhulu futhi udlala indima ebalulekile ekilasini management. Ukuvikelwa komphakathi emisebenzini uthisha ekilasini - uhlelo ukuthi anganikeza izimo ezinhle zomphakathi ukuze kwakhiwe umzimba, ngokomoya, ngokokuziphatha nakongqondongqondo, ukuthuthukiswa kanye nokusebenza izingane, nokuvinjelwa ukwephulwa besithunzi sobuntu babo, amalungelo kanye nezithakazelo. Ukuqaliswa komsebenzi onjalo senzelwe ukuze uvumele ekuthuthukiseni wengane izimo akhona emphakathini kanye nakwezomnotho. Umsebenzi we uthisha ekilasini kule ndawo - umsebenzi hhayi kuphela umculi, kodwa futhi umqondisi osiza izingane nabazali bazo ukuthola ukwesekwa emphakathini.
uthisha ekilasini lucwaningo iqoqo isinyathelo ezingokwengqondo Pedagogical, ngaleyo ndlela linikeze ekuthuthukiseni ezenhlalo wengane amafomu ubuntu bakhe, nezimo nezimo ezihlukene. Uma lokhu uthisha ekilasini umsebenzi ukuzixazulula acute izinkinga zesikhathi esifishane hhayi kuphela, kufanele ukulungele kwalawo izenzakalo, thatha izingane izinkinga izinkinga ezingase ziphakame endleleni yakhe. Kuyoba okufanele ukubheka imisebenzi zokuvikeleka komphakathi ngomqondo ezibanzi emincane izwi. Ngomqondo ewumngcingo, kuba umsebenzi ukuthi uthisha ekilasini sihlose ukuvikelwa kwezingane nasezimweni ezinzima kakhulu. Lawa kwebantfwana labavela emindenini emikhulu, izintandane, izingane ezikhubazekile, ababaleki nabanye abadinga ukuvikelwa ngokukhethekile nomphakathi. Futhi ngomqondo ebanzi - kungumsebenzi sotsialnozaschitnaya nazo zonke izingane nabazali bazo bacondze etindzaweni letehlukene. It lingahunyushwa baphetha ukuthi into zokuvikeleka komphakathi, iziqinisekiso yokuzijabulisa zonke izingane, futhi akuxhomekile umsuka ke, inhlalakahle abazali babo. Ukuphumelela uthisha ekilasini iyona ukulondeka kwangempela yezenhlalakahle ngayinye lemfundzi ngamunye. Injongo ukufanisa ukusebenza nokuphila emphakathini, ngokwenyama, ngokomoya nezamasiko ingane yamukelwa izimo zanamuhla namazinga umphakathi ekuphileni, cwaningo, lonke. Futhi izinkomba subjective esibonisa degree of ukunganeliseki ukwaneliseka kungakhathaliseki zokuvikeleka komphakathi kwezingane ngokwabo. Ngakho, kuvikeleka kutenhlalo kanye nemfundo wengane kuyizinto eziyinhloko emhlabeni lapho imisebenzi uthisha ekilasini, ukugcwalisa ngokuqukethwe.
Okuningi Abanye ochwepheshe ekusebenziseni zokuvikeleka komphakathi ingane - kuyinto usonhlalakahle. Into yomsebenzi we uthisha yokuzijabulisa izingane abadinga usizo komphakathi yabo. Lezi izingane bokusungula, ngokwengqondo nezenhlalo iziyaluyalu (ngenxa ekuthuthukiseni ezenhlalo kodwa imfundo kahle nomphakathi), kanye labantwana ngokomzimba iziyaluyalu zentuthuko (abayizimpumputhe, abayizithulu, ukugula cerebral palsy nabanye.) .
Izinhloso nemisebenzi uthisha yezenhlalakahle udala izimo isivikelo nenduduzo ngokwengqondo; ukwaneliseka ngokwazi ukuthi izidingo zakhe; ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba izenzakalo ezimbi ekhaya, esikoleni.
Umqeqeshi Social nabazali ihlelwe ngaphandle esikoleni isikhathi umfundi: eliqondisa kothisha umsebenzi wesikole, Iqondisa ukulungiselelwa kwe-kukharikhulamu social work esikoleni. Wakhokha ukunakekela okukhethekile izingane ayifakiwe esikoleni, zisizwe zibuyele esikoleni. Ubamba esiza abantulayo izenzakalo, uhlela amaholide izingane ogulayo nezintandane; elawula imindeni emikhulu bathola izinzuzo komphakathi nokuningi, futhi uyabandakanyeka imfundo zomthetho abafundi, hhayi nje ifomu zomthetho lokukholisa, kodwa futhi odala amakhono okuhlalisana sivikeleke.
endaweni Okubalulekile zokuvikeleka komphakathi wengane - ukuhlinzeka isimo lithathelwe yayo esikoleni, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi ezinyangeni zokuqala sokuhlala kwakhe esikoleni. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene lokuqala ibanga noyisemkhulu, wedlula John esikoleni sabaqalayo kuya esigabeni maphakathi ukuqeqeshwa.
Ukuthuthukiswa kwezingane zasenkulisa livela ngezindlela eziningi, kodwa lapho bafundzi beta ngani esikoleni, isikole siqala ukubonisa kuzo zonke izidingo ezifanayo. Ngeziphambeko kusukela lezi zidingo kwenza kube nzima hhayi kuphela othisha, kodwa futhi nzima impilo yomfundi. Futhi ngisho noma sikhuluma indlela ngamunye, kuba cishe ngeke kwenzeke futhi akusiyo ngenxa yokuthi isigaba abafundi abangaphezu kuka-25, futhi iqiniso lokuthi izidingo ejwayelekile babeka phansi uhlelo kungenzeka ingabi ngokucacile futhi ngokuphelele kuqondwe bonke abafundi. Lapha futhi baqala nobunzima ekufundeni, kukhona izingxabano phakathi izingane. Ukuze kuqedwe lezi zinkinga futhi kukhona isikhundla esikoleni sokusebenza kwengqondo .
School sokusebenza kwengqondo obonisa in isikole imisebenzi yakhe professional okuhloswe ngaso kulondolozwe ngokwengqondo nangokwenhlalo inhlalakahle abafundi enqubeni yokufunda ezikhungweni. Kungaba neqhaza ekuvikelweni kwamalungelo ngabanye, kanye kunomthelela ukuthola nokuvumelana isikhungo. Leli gama lembula izici ezingase zithinte ukuthuthukiswa ubuntu abafundi, ukuthatha izinyathelo zokubasiza ngokwengqondo ukuze abafundi, abazali babo, kanye abasebenzi Pedagogical ekuxazululeni izinkinga ezithile. Kumiswa isiko ngokwengqondo abafundi, ngingomunye imisebenzi eyinhloko wezengqondo esikoleni. Umsebenzi wakhe kuhlanganisa ukubonisana kwabasebenzi esikoleni on ukuthuthukisa isikhungo, isicelo kwengqondo kwezemfundo nendlela abakhuliswe ngayo.
Ngezinye izikhathi izingane abaluleke kakhulu ukuveza izinto ezibakhathazayo yalokhu kukhona wezengqondo. Phela, abazali ingane ingase nje esabe ukungitshela ukuthi kwenzekani, noma kwenzeka ke nomsebenzi ehlosiwe of wezifo esikoleni. izenzakalo ngumphakathi esikoleni wezengqondo ngokuqinisekile sinokubaluleka okukhulu, kodwa kahle ngempumelelo. Kuyadingeka nge eminyakeni yokuqala lokufunda lengane esikoleni sokusebenza kwengqondo nokuqaphelisisa oqondile ihlonze noma yibuphi kwezinso ukuthi esikhathini esizayo kuba indlela futhi ukubeka konke endaweni efanele. Ingabe Liwusizo olukhulu wezifo zesikole isinqumo izingxabano phakathi kothisha, ke sifuna ukuxegisa izinkinga ezikhona, ngaleyo ndlela kuzole isimo phakathi izingane. Indima wezifo esikoleni kubaluleke kakhulu ngenxa yokuphila esikoleni, ngakho-ke kusiza abafundi kanye nabazali ukuba baziqonde bona ngokwabo, ukwakha ubudlelwano, futhi sifinyelele lo Chile wayefisa ekuthuthukiseni abafundi.
Inqubo yokufunda ngayinye indima uthisha kubaluleke ngezinga elifanayo futhi abalulekile. Zonke izindlela, izindlela, amasu kanye nobuchwepheshe abawasebenzisayo yokusiza umumo ubuntu bengane, ukwazi ukuziphilela futhi ukusebenza emphakathini wanamuhla. Ngakho-ke kudingekile ukuba ucabangele zokuvikeleka komphakathi wonke umfundi, wonke umsebenzi wesikole. Njalo uthisha e elithile kufanele abe izimfanelo wezifo isikole nothisha kwezenhlalo kanye uthisha ekilasini, futhi kufanele nje ube umngane omuhle zonke umfundi. Ngemva isipiliyoni nguthishela idluliselwe ewusizo lomfundi ngamunye ekuphileni kwakho.
ERussia namuhla kukhona amazinga ahlukene zokuvikeleka komphakathi kwezingane asebeke babasebenzisa kokubili emazingeni yombuso kanye zesifunda. Esikhathini arsenal abazali, izikole, izinhlangano zomphakathi, isimo kanye nezinye izifundo zokuvikeleka komphakathi kwezingane kuyinto iqoqo imikhuba eyayiyoholela elamukelekile ku zokuvikeleka komphakathi izingane.
Eqinisweni, ezikoleni zethu, ukusebenza imfundo nomphakathi akuyona kwenziwe ngokugcwele. Kwezinye izikole kukhona wengqondo, abanye babe pedagogue nomphakathi, kodwa ezimweni ezingajwayelekile, kukhona izikhundla ezimbili esikoleni esifanayo. Lokhu kudinga ukuzinika omkhulu othisha, okuyinto kunciphisa kakhulu ezingeni zokuvikeleka komphakathi kwezingane. Eminye imisebenzi kuvikeleka kutenhlalo abathola isahlulelo, enye ingxenye, futhi abanye baye ukhohliwe. Kodwa sifuna ukuletha intuthuko, ukuthuthukiswa komphakathi, ikhono afinyelele ezinyoni emphakathini. Ngakho-ke, lapho besanda kuqala yokuziphendukela kwemvelo kubalulekile ukuvikela ezihlukahlukene nobungozi, futhi isikole kufanele kube indawo ingane, lapho wavikelwa futhi kuhlakulelwe ngokugcwele. Ngakho-ke kubalulekile kuzo zonke izikole ukusebenzisa uhlelo ukuvikelwa komphakathi, okuhlanganisa uthisha ekilasini, isazi sokusebenza kwengqondo esikoleni, uthisha kwezenhlalo, okuyinto nihlanganyele, ingafinyelela elamukelekile.
Ukufundwa kwezincwadi futhi
1. Y. Vasilkov Technique kanye nakho uthisha nomphakathi: Incwadi. angabonelela abafundi. Executive. ped. Proc. izikhungo. - M: Academy, 2002..
2. Declaration of Samalungelo Engane // Isivikelo wezizwe lamalungelo nenkululeko: Sat. Doc. - M. 1990.
3. Poddubnaya TN Directory of pedagogue komphakathi / TN Poddubnaya. - Rostov n / D 2005.
Blue Lake endaweni St uSergiyu. Imephu Samara Region
Iziqinisekiso yabesifazane noma ukufakwa kwi ezahweba lady